हाम्रोखबर बुधबार, श्रावण ७ २०७७
काठमाडौं । सरकारले गए राति १२ बजेपछि लकडाउन अन्त्य गरेको छ । योसँगै धेरै क्षेत्रहरु खुल्ने भएका छन् । तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रका बारेमा सरकारले केही पनि बोलेको छैन । यसै सन्दर्भमा अभिनेत्री पूजा शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी छिन् ।
चलचित्र क्षेत्र चलायमान गर्न हामी कति गम्भिर छौ ? भन्ने शीर्षकमा अभिनेत्री शर्मा आफ्नो धारण यसरी व्यक्त गर्छिन्–
‘बजार खुलिसके, यातायात खुलिसके, सरकारले एक प्रकारले लकडाउनको अन्त्यको घोषणा गरेको छ ।
तर न त सरकार, न त चलचित्र क्षेत्रका नेतृत्व वर्ग अब चलचित्र क्षेत्र सुचारू गर्ने तत्परतातर्फ अग्रसर देखिएका छन् ।
के भारतको चलचित्र क्षेत्र खुलेपछि मात्र नेपालमा खोल्नु पर्ने हो रु के हामी नेपाली चलचित्रको छुट्टै अस्तित्व छैन र ?
नेपाली चलचित्र चलायमान हुन सक्दैन ?’ भन्ने जिज्ञासासहित अभिनेत्री शर्माले यस विषयमा छलफल र वहस चलाउन तथा सरकारलाई दवाव दिन र कोरोना कहरबाट सुरक्षित रहने व्यवस्था सहित चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेकी छिन् ।
ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा ‘मेरो पनि होइन र यो देश ?’